धनुषाका दुई युवामा कोरोनाको आशंकाले मच्चियो हडकम्प ! - हाम्रो जनकपुर
धनुषाका दुई युवामा कोरोनाको आशंकाले मच्चियो हडकम्प !
तस्बिर Abp news
दुवै जनालाई जनकनन्दीनी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याएको छ ।
जनकपुरधाम । विश्वमा त्रास फैलाएको कोरोना भाईरसको सिकार धनुषाकै दुई युवक भएको भन्दै भारतीय मिडियाले समाचार प्रकाशन प्रकाशित गरेपछि आसपासको क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ ।
भारतको अहमदाबाद रोजगारीको शिलशिलामा गएका धनुषाका दुई युवक आउँदै गर्दा उनको चेकजाँच गर्दा कोरोना भाईरसको लक्षण देखिएको अस्पताल श्रोतलाई उदृत गर्दै भारतीय सँचारमाध्यमहरुले समाचार लेखेका छन् ।
यद्यपी, ती दुवै जनामा कोरोना भाईरस नरहेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले दाबी गरेको छ । न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै धनुषाका डिएसपी एवम् प्रहरी प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले कोरोनाको हल्ला मात्र भएको बताउनुभएको छ ।
ती दुवै युवकलाई नेपालको सीमासँगै रहेको भारतको जयनगर बजार स्थित रहेको सदर अस्पतालमा भर्ती गराईएको थियो । ट्रेनमा घर आउँदै गर्दा उनको स्वास्थ्य खराव भएको थियो ।
प्रदेश नं. २ को धनुषा जिल्लाको जनकनन्दीनी गाउँपालिका बस्ने दुई युवकको स्वास्थ्य अवस्था विग्रेपछि तत्कालै उनलाई मधुवनीको सदर अस्पतालमा भर्ना गराउँदा कोरोना भाईरसको लक्षण देखिएको भनेर अस्प्ताललाई उदृत गर्दै सँचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेको छ ।
तर उनीहरु कोरोना प्रभावित नभएको र असपतालको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । भाईरसले पीडित मात्र रहेको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । कोरोनाको लक्षण देखिएलगत्तै उनको परिवारजनलाई खवर गरेको थियो ।
अस्पतालको चिकित्सकका अनुसार दुवै जनाको सैम्पल नेगेटिभ आएसम्म निगरानीमा राखिनेछ । डाक्टरलाई उदृत गर्दै भारतीय सँचारमाध्यमहरुले कोरोना भाईरसको सैम्पल आउनमा कम्तिमा १४ दिनसम्म लाग्ने छ ।
त्यसपछि मात्र कोरोना भाईरसबाट पीडित भएको वा नभएको भनेर पुष्टि गरिने जनाइएको छ । यस अवधिमा दुवै जनालाई चिकित्सको निगरानीमा राखिने जनाइएको छ ।
सो सम्बन्धमा भारतीय सीमा लगत्तै रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीका प्रहरी नीरिक्षक हृरेन्द्र रोकायाले समेत रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको बताउनुभएको छ । अस्पतालको रिपोर्टलाई हेर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको र अस्पतालले पनि त्यही भनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
भारतको जयनगरबाट दुवै जनालाई अहिले भर्खरै जनकपुर ल्याइएको छ । दुवै जनालाई जनकनन्दीनी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याएको छ ।
सभार न्युज ब्यूरो
बलात्कारपछि घाँटी निमोठिएर हत्या
जनकपुर:मेयर लालकिशोरलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएपछि: ओली समूहमा जाने तीब्र तयारी!
प्रहरीका जवानको पीडा : ३० वर्ष जागिर, १७ वर्षसम्म एउटै पद
विश्वभर कस्तो छ कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था ?